QODISTA CEEL SHIDAAL AH OO SHALAY LAGA BILAABAY DDSI | SOMALISTATE.COM
QODISTA CEEL SHIDAAL AH OO SHALAY LAGA BILAABAY DDSI
No comments JIGJIGA – Shirkada laga leeyahay Shiinaha, Poly-GCL, ayaa shalay bilowday qodista ceelkii lixaad ee laga qodo Elaale oo ku taal dhulka joogiisu hooseyo ee loo yaqaan ‘Ogaden Basin’.
Bilowga qodista ceelka ayaa waxaa goob-joog ka ahaa wasiirka macdanta ee Itoobiya, Motuma Mekassa, iyo safiirka Shiinaha u jooga Itoobiya – La Yifan.
Mekassa ayaa xusay inay ceelkani ka duwan yahay kuwii hore iyada oo laga rajaynayo shidaal isugu jira gaas iyo batrool. Waxa uu intaa ku daray, in shidaalka lagu soo saari doono muddo 3 sano ah.
Shirkada Shiinaha ah ayaa balaayin doolar ku maalgalinaysa mashruuc hirgalintiisa shaki laga muujiyey oo la doonayo in lagu soo saaro shidaalka DDSI. Waxaa mashruuca qayb ka ah in la dhiso dhuun dheer oo isku xidha goobaha shidaalka iyo dekada Jabuuti oo la doonayo in laga dhoofiyo.
Jabhada ONLF oo dagaal heerkisu hooseyo ka wada meelo gobolka ah ayaa horey ugu hanjabtay inay bartilmaameed ka dhiganayso shirkadaha baadhaya ama qodaya shidaalka maadama gobolku yahay meel colaad ka socoto.
Itoobiya ayaa ciidamo badan ku soo tuushay meelaha shidaalka laga baadhayo iyada oo dadka reer guuraga ah iyo xoolahooda loo diiday inay ku soo dhawadan aagas. Waxaa jira xogo isasoo taraya oo tilmaamaya in dad xoolo- dhaqata ah aagas lagu laaye kadib markii ay damceen inay xoolahooda dhulkaas daaq uga helaan.
Safiirka Shiinaha u jooga Itoobiya ayaa sheegay in mashruucu astaan u yahay iskaashiga ka dhaxeeya labada dal.
Dhanka kale, waxaa jira warar sheegaya in saraakiisha ugu sareysa ciidanka Itoobiya isugu tageen Jigjiga toddobaadkii la soo dhaafay si ay uga arrinsadaan kacdoonka iyo colaadaha ka jira Itoobiya. Xogtan oo lagu faafiyey warbaahinta mucaaridka ayaa lagu xusay in shirka lagu go’aamiyey in ciidan badan loo diro gobolka Axmaarada iyo in mushaharka loo kordhiyo askarta sii loo yareyo goosashadooda.
Waxaa kale oo suurtagal ah in kulanka saraakiisha lagu soo qaaday sidii loo sii adkeyn lahaa amaanka goobaha shidaalka ee ismaamulka Soomaalida si kalsooni loo siiyo shaqaalaha Shiinaha ah iyo kuwa ka yimid Itoobiya inteeda kale oo cabsanaya.